. Freephone: (+) 800-7767-6343 (Australia, Austria, Belgium, တရုတ်နိုင်ငံ, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, Ireland, Italy, Japan, Macau, Netherlands, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Taiwan, ဗြိတိန်နိုင်ငံ)
. Skrill is the new name for Moneybookers, အင်တာနက်ကိုကျော်ပိုက်ဆံလွှဲပြောင်းများအတွက်အဆင်ပြေကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှု.
. အတူဒေသတွင်းဝန်ဆောင်မှု 12 ထောက်ခံဘာသာစကားများနှင့်ကျော်အတွက်ပြည်တွင်းငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာ 30 နိုင်ငံပေါင်း.
. ထိုကဲ့သို့သော SMS နှင့်ဖက်စ်ပေးပို့ခြင်းအဖြစ်နောက်ထပ်န်ဆောင်မှု.
. How to fund: Moneybookers နှင့်အတူအားလုံးသင့်ရဲ့အကြွေး / debit ကဒ်နှင့်ဘဏ်အသေးစိတျ Register မှာကျော်ဆပ်ဖို့သူတို့ကိုအသုံးချ 20,000 အွန်လိုင်းဆိုင်များ. This means that you don’t need to provide them each time you want to purchase goods and services online.
iDEAL offersasecure and convenient way of paying online. You can pay within the trusted online banking environment of your own bank. Simply pay the way you usually pay bills with online banking. Find out more info. တွင် www.ideal.nl
သငျသညျ depositing ရန်ပုံငွေနှင့်အတူမည်သည့်ပြဿနာမျှရှိပါက, စိုးရိမ်ပူပန်ကြပါဘူး, you can contact one of our highly trained customer services people from 6:00 AM to 23:00 GMT by email, ဖုန်းသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းချက်တင် – Contact Us .